Nadiifinta suufka - Geofumadas
Luulyo, 2009 GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
Tan waxaa lagu magacaabaa ficilada qalabka GIS si loo baabi'iyo isbedelka isdabajoogga ee nidaamyada sida caadiga ah lagu aqbalo miyir-beeleed. Qalab kastaa wuxuu ku hirgeliyey hab gaar ah, aynu aragno kiiska Bentley Map iyo Manifold GIS.
Microstation waxaa ku jira laba qalab oo isku mid ah, midna waxaa hawlgaliyay keyin (nadiifinta wada hadalka) iyo tan kale ee loo yaqaan 'Nadiifinta dhirta'. Sababaha loo kala firdhiyo awgeed, dhamaanteen waan ka door bidnaa midka hore, in kasta oo aanu badhan kale u jirin tan aan ahayn amarkii hore.
Waxaa ku jira lix ikhtiyaar oo isweydaarsi ah oo ku yaal qaybta bidix, halka qaybta hoose ay tahay dulqaadasho iyo dhinaca midig halka loo socdo iyo astaamaha lagu muujinayo iswaafaqla'aanta. In kasta oo loo yaqaan nadiifinta cilmiga dhirta, maahan magaca ugu habboon, ee waa qalab nadiifinta vektorka oo ay ka mid yihiin:
Khafiif ah, wax yar ayaa loo isticmaalay laakiin waa inay go'aamiyaan xadgudubka xaglaha aan loo baahnayn
Ku dhowaad mid kasta waxaa jiray beddelka xulashada halka khaladku socday, ikhtiyaar lagu calaamadeeyo ama lagu baabi'iyo iyo dulqaadka. Ma xumeyn, waxaa jiray xitaa aaladaha mrf ee lagu soo ururiyey mdl oo kuu ogolaanaya inaad dhiqlaha ka baarto. Laakiin waxay hore u ahaan jirtay madax xanuun xaalad kastoo jirta, sababtuna maaha nadaafadda oo af badan laakiin faa iidada dambe ee falanqaynta duruufaha ama isweydaarsiga. Tusaale ahaan, khariidado khariidado kala duwan ah, isku-dhac la'aanta noodhadhku waxay ahayd dhibaato, waalli
Foornada ayaa baddashay Bentley Map, waxaa jira had iyo jeer Dialog Cleanup in kasta oo ay u baahan tahay in mashruuc la furo, laakiin badalka kale wuxuu ahaa mid xooggan oo ku yaal hal guddi ah. Intaa waxaa dheer, fursado aad u kala duwan ayaa lagu daray iyaga dhexdooda:
Eeg kantaroolka filter
Waxaad kala saari kartaa nooca walxaha (xariiq, jaantus, jilicsan iwm)
Ciyaarta waxaa ku jiri kara nooca, midabka ama dhumucda
Abuuri faylka tooska ah ee faylasha
Isku dhufasho ayaa dhaafi kara lifaaqyada
Waxaad u dhigi kartaa qaabka qaabka faylka .rsc oo dib ugu yeeri karo
Thin waxaa laga saaray, in qofna uusan isticmaalin sababtoo ah ma shaqeyn
Waxay noqon laheyd lagama maarmaan in la tijaabiyo haddii madax xanuunka lagu hagaajiyo falanqaynta cilmiga, maxaa yeelay waxay ahayd mid aad u adag oo dalbatay saxnaanta jeexjeexyada aadka u waalan si dulqaadku uusan wax macno ah u samayn. Calaamadaha digniinta ayaa sidoo kale ah walxo aan firfircooneyn oo vector ah, taas oo ka dhigaysa in badan oo shaqada ah xirfad muuqaal ah halkii ay ka ahaan lahayd unug firfircoon.
Bentley waa in uu si adag u shaqeeyo maadada, sababtoo ah inkastoo Bentley Map waxay taageertaa dusha sare, kalabar ayaa laga qaadaa timaha. Intaa waxaa dheer ma taageerto si fudud Geometries adag, oo laga yaabo inaysan ku dhicin wax badan oo ka mid ah caleemaha laakiin lakabyo kale sida caleenta dhirta ama meelaha khatarta ah, si loo dhigo dhowr tusaale. Juqraafiyadu waxay u beddeshay unugyada ama qaababka adag, si aanad awoodin samee falanqaynta fayo-qabka. Waa in ay fududeeyaa habka, sababta oo ah barnaamijyadan badankood waxay sameeyeen tallaabooyin aad u fiican, sida, isticmaalka jiido Manifold GIS waxay qabataa shaqo aan caadi ahayn iyadoon aad u dhib badnayn. Tani waxay la shaqeysaa qalabka / farsamada gacanta, kaliya dooro walxaha oo kor u qaadaan guddi ay ku jiraan falanqeyn degdeg ah sida waafaqsan qodobada lakabka:
laamaha kala duwan
jaangooyooyin aan kala go 'lahayn
Ka sokow, iyaga xulashadooda waxaa lagu muujiyaa midab kale waxaana jira ikhtiyaar shaqsiyeed ama is-hagaajin ballaaran. Samee isbeddel dulqaad, sidoo kale tani waxay ku jirtaa aragti leh xulashooyin si aad u rogto, ku xigto, ficil u qaado oo u dhaweyso.
Ugu dambeyntii isticmaaluhu wuxuu ku habboon yahay inuu dhibsado ama qalab isku daro, laakiin waa in aan la aqbalin waxqabad adeegga aan bixino oo aan rajeyno in aan wanaajinno waqti ka dib.
Post Previous" Hore MapInfo: Shalay, maanta, iyo malinta berri
Post Next Xogta ku jirta cadawgaNext »
25 Jawaab ah "Nadiifinta Jirka"
In la caddeeyo shaki ku saabsan inay soo gaareen boosteejeyaal.
Tusaalaha waxaa lagu muujiyey Microstation Geographics 8.5
Iyada oo Bentley Map V8i xakamaynta jimicsiyada adag sida sida godadka gudaha ah ma aha dhibaato.
Intaa waxaa sii dheer, laga soo bilaabo maaraynta astaamaha XFM oo leh Khariidadda Bentley, caqliga ku-xirnaanshaha xudduudaha ayaa lumiyay mudnaanta in lagu sameeyo qaab ahaan. In kasta oo aaladaha samaynta xiriiriyeyaasha ay lamid yihiin iyo sidoo kale kuwa gudbinta xogta inta u dhexeysa bartamaha iyo qaabka / soohdinta.
Patricio J. isagu wuxuu leeyahay:
Hello; Waad og tahay waxaan rabay in la ogaado haddii aan caawin kara aan dhibaato waxa dhaca waa waxaan doonayaa in la abuuro template cusub iyo ka tago default taas oo i caawin doona marka la samaynayo sawir cusub sida profiles style tusaalooyin xuduudaheedu qaarkood, markaas rabay inuu ogaado sida aad u abuuri karaan template cusub oo tanuna ha koobin cusub sanyihiin labada design cusub sida Hababka wax, waxaan rajaynayaa Ma i caawin kartaa, laakiin jawaabo kale oo aan ogahay in aad mar kale u joognaa in arrimahan si mahad aad u naxariis badan
Si aad u dhoofiso waxay ku jirtaa Microstation Geographics.
Waa inaad sidoo kale ku xiran tahay mashruuc, si aad u dhoofiso lakabyada leh daaradda.
Sidoo kale, si loo dhoofiyo astaamaha kujirta qaab nooca, oo leh xog laxiriirta. Kuma shaqeyn doono qanjidhada iyo xuduudaha.
Haddii waxaas oo dhami ay fiican yihiin, ii sheeg haddii aad farriin dirto markaad dhoofineyso. Waxaad kaloo isku dayi kartaa furitaanka faylka dbf-ka ee Excel si aad u aragto haddii uu leeyahay xog.
Hello mawduucan waa mid aad u fiican, waxaan jeclaan lahaa in la ogaado hadii, maxaa yeelay suurtagal maaha in la dhoofiyo fayl buuxa shp sababtoo ah marka dhoofintu dhamaato waxay dhalisaa xogta aan dhammeystirneyn ee tan waxaan ogahay markaan isku dayayo inaan dib u soo celiyo faylka maraya bentley map
Miyay qadarineysaa haddii qof uu leeyahay xal ama talo
ok g aan u ogaado qariidada autocad, ka dibna waan kugula talinayaa. mahadsanid.
Kaliya taasi waa AutoCAD Khariidad 3D ama AutoDesk Civil 3D. Tan waxaad ku sameyn kartaa waxaad ku sameyn laheyd GIS kasta, waxaad kuxirtaa macluumaadka miis, sameyn kartaa falanqaynta topolojiga, khariidadaha muuqaalka, iwm.
Haddii aad rabto in ay ku riday waa HyperLink fudud, furitaanka guryaha shayga, aad aragto doonaa beer yeedhay HyperLink, oo waxaad la Wadaajinaysaan kartaa url Jidka of website a a, Jid ka mid ah file a on disk hoose, ama qaabka a khariidad kale.
Marka laga hadlayo AutoCAD, waxay taageertaa hal hindhiso oo shay kasta ah.
su'aal khubaro duurka, ayaa baadhitaan ay samaysay oo la GPS, kuhayaan AutoCAD, waxaa jira qaar ka mid ah codsiga in ku dari kartaa iyaga u yeelaa wax CAD ah ama aad u baahan Control User ah sida blocks, oo lagu daray sida aan xiri kara sawir inay element CAD ama block, c.
Waad ku mahadsan tahay dhammaan dadkii ka qaybqaatay kulankaan.
Dhab ahaantii, waxay u muuqataa in 248 ay ahaayeen dhibco keliya oo la oggol yahay, laakin 996 ayaa uqalmaasho inay suurtogal tahay waxa aan u baahanahay in aan ka shaqeeyo.
aad u mahadcelin,
Mid taban, qoraa ka mid ah macruufka ayaa ku ilaaliyay furaha ereyga sirta ah, wuxuuna uga tagay xadidan safka 996. Wuxuu u sameeyay si uu u ilaaliyo hawlgallada ka socda tiirarka 996, si barnaamijyada barnaamijku ula shaqeeyaan unugyadaas si gaar ah.
Si aad wax uga beddesho waxay ku lug lahaan doontaa jebinta qumbaha ee code.
feylka wanaagsan ee Excel ee shaqada, su'aasha ah sida imtixaannada aan sameeyay ayaa xaddidaya tirada dhibcooyinka garaafka, kiiskeyga waxaan u baahanahay inaan sameeyo garaafyada meel u dhow dhibcaha 4000, sidee baan u sameyn karaa si aan wax uga bedelo caqabadan miisaaniyadeed waxay qaadan doontaa waqti aad u dheer in la qorsheynayo qaybaha.
aad u mahadcelin
Dabcan, waxa ugu fiican ee aan ogahay waa XYZ-DXF, oo ku dhaca dxf dhibcaha liiska Excel. Tiirka Koodhku wuxuu ka koobnaan karaa noocyo kale oo xog ah, safka lakabka wuxuu u oggolaanayaa qodobbada inay galaan heer gaar ah.
Halkan waa sharaxay talaabo talaabo.
Waad ku mahadsantahay wax badan, way shaqaynaysaa. su'aal kale waxay noqon doontaa codsi ii ogolaanaya inaan garaafo xogta DGN ama DWG ee lagu kaydiyo habka Excel, Isku-duwaha XY iyo taas oo aniga ii oggolaanaya inaan ku daro qodobka dareenka ah ee halyeeyga qoraalka ah ee lagu keydiyay beerta.
waad mahadsan tihiin ,,,,,,,,,,,,
Beddel kale ayaa ah inaad isticmaasho qandaraaska xulashada caqli-darrada ah, oo aad adigu samayn karto xulasho qaab, iyo waliba horay u soo xushay walxaha ku habboon.
Iyadoo Microstation XM ama ka sareeya, waxaad ku kaydin kartaa xayndaabka.
Marka hore waxaad sameysaa xayndaabkaaga
markaa adoo isticmaalaya furaha
gal, xayndaab, ka dibna dooro dhibco, ka dibna fursadaha u muuqdaan:
dooran mid ka mid ah, ka dibna guddiga kuu ogolaanaya inaad doorato nooca xayndaabka xayndaabka (gudaha, clip, iwm)
kadibna riix shaashadda oo tag.
su'aasha ma jiraan wax codsi ah microstation taas oo aniga ii oggolaanaya inaan isticmaalo amarka Amarjeexa ee qaabka deyrka.
mahadsanid …… ..
Saaxiib ayaa mahad leh, waan raacayaa taladaada.
Aan aragno, waxaan sharaxi doonaa dhowr waxyaalood.
Si aad u bilawdo, noocyadaas Juquraafiyadan, (Hadda Bentley Map) waxay tixgelinayaan in shay adagi uu yahay darajo aan joogto aheyn, taasoo macnaheedu yahay in xannibaadaha udubdhexaadka ah iyo xariiqyada aan la nadiifin.
Asal ahaan, shuruuda inay wareegyadu yihiin linestrings ayaa macno samaynaya, maadaama barnaamijyada GIS ay ku maareeyaan marinka qalooca heerka xogtu adagtahay, maadaama ay tahay dariiqyo cufan oo aan xadidneyn, sidaa darteed ikhtiyaarka gudbinta a Xariiqa u ekaanta qalooca waa macquul. Bal ka fikir sida aad samayn lahayd si aad u sameyso codsi abuuraya jumlad isku haynta iyo masaafada, haddii ay ahayd qalooca ama isku xirka meelaha aad u dhow waa waalli.
Marka nadiifinta topolojiga, marka aad adeegsaneyso qaybo ka mid ah qaybaha, waxaad u beddeli doontaa xargaha xariiqda. Waxa aad qeexi karto waa dulqaad sidaa darteedna ma jiraan xariiq aad u tiro yar ama aad u yar oo qaabka qaabku qaloocan yahay lumaya.
Dulqaadkan waxaa lagu badalayaa:
Goobta Shaqada> doorbidyada> topology> Dulqaadka Stroke.
Iskuday 10, 1, 0.5, 0.1 iyo wixii la mid ah ilaa aad ku qanacdo cabirka qeybta in wareegyada ay ka hadheen.
waxyaabaha toosan, taas oo meelaha dedan oo ka mid ah ka shaqeeyaan, balse isticmaalka topology nadiifinta iyo abuurka ah ee xubno ka adag in Geographics xubno labada cirif matalayay sida khadadka qaadashada bilowga iyo dhamaadka ee xariiqa qallooca, ee ma suuroowdaa jid ama qalab dheeraad ah line ka dib markii qaab ee xariiqa qallooca.
Waad ku mahadsantahay Badbaadiyaha .........
hehe aad u wanaagsan, u mahad naqayaa wax kasta.
Fiiri, waxaan hubaa in ay jirto habab badan oo casri ah iyada oo loo marayo sheybaaro, laakiin waxaan isticmaalaa Xarunta Naqshadeynta Jajabka ee Jajabinta:
Si tan loo sameeyo, waxaad sameyneysaa waa furid labada sawir, mid wuxuu leeyahay qaabka keydka iyo kan kale oo aan laheyn. Markaa waxaad ka dhigeysaa cabirka daaqadaha mid ka hooseeya aragtida buuxa, sidaa darteed labadoodaba waad arki doontaan.
Waad taabaneysaa daaqada leh qaabka, waxaad aadeysaa goobaha, dusha sare, halkaasna waxaad ka eegtaa qaabka aad rabto inaad ugu dhaqaaqdid sawir kale. Markaa waad jiidaysaa oo waxaad ku tuurtaa daaqadda kale, waana taas. Hadda haddii aad aragto qaababka laga heli karo sawirkaaga cusub, midka aad soo jiiday ayaa durbaba jira.
SALAAN, mar labaad aniga oo aan haddana kuu sheego in kaalmadaadu ay wax badan i caawisay, laakiin, mmm ...
Hadda anigu ma aan samayn karo waa badbaadin style abuuray. Abuur style dhibic, iyo xoogaa oo dhan dalban, laakiinse anigu uma aan samayn karaa si ay u badbaadaan, ie oo raba in la sameeyo sawir cusub laakiin raba style utlizando uu aaminsan yahay, maxaa yeelay, simplamente ma aan heli iyo in la abuuro leeyihiin in ay dib si ay u tagaan.
Haddii ay jirto hab lagu badbaadinayo iyo sawir dambe ka dib waxaad isticmaali kartaa?
hehe ... waana ka xumahay dhibaatada, laakiin waan ogahay inaan ahay dhagax.
Haa, waxaad samaynaysaa tan:
Dhinaca bidix, saddex tabs oo ka muuqda:
Tani, walxo kala duwan oo leh khariidada, dusha, dhibcooyinka, profiles, tuubooyinka, qaybaha kala duwan.
ka dibna mid kasta oo ka mid ah, markaad riixdo calaamadda dheeraadka ah, qaababka (qaababka dusha sare) ayaa la geeyaa si loo isticmaalo tusaale.
Si aad u abuurto mid cusub, waxaad si sax ah u taabataa galka "dusha sare" waxaadna doorataa "mid cusub". Halkaa waxaad ku siin kartaa meelahii loo baahnaa, magacaabi, iyo wixii aad rabto. Sidoo kale halkan waad ka beddeli kartaa.
Markaad ka shaqeyneyso dusha sare, laga soo bilaabo tabe filaha, waxaad si toos ah u taabaneysaa dusha sare, waxaad doorataa "guryaha" xulashada "macluumaadka" waxaad dooran kartaa "qaabka dusha sare" ee aad abuuray.
Waxaan rajeynayaa in sharraxaadda ay tahay mid faa'iido leh, wax walbana, ma aha buuqa.
HELLO, mar kale way dhibeysaa, laakiin si daacad ah waxaan ahay dhagax, dhab ahaantana ma garanayo sida loo sameeyo, waan ogaa, laakiin weli ma ogaanayo haddii aad haysato fursad aad ku caawiso, maadaama aanan dhabta aheyn.
Dabcan, marka aad codsaneyso qaab waxay ku siineysaa ikhtiyaarkaaga abuur cusub oo u keydso isticmaalka dambe
HELLO, waa markii ugu horeysay ee lagu hambalyeeyo boggan si run ahaantii u weyn.
Oo ka xumahay in ay qaataan meel this, laakiin qaadan theme reiente ah farriin u noqon visto.Mi dhab ahaan la Civil 3D, oo ii soo sheeg haddii aad ku badbaadin karto Hababka abuuray igu (dusha, khadadka dusha, profiles, qaybaha, iwm by .).
Tan iyo markii aan rabay in aan qaabeyno noocyada noocan ah, wax yaabahana waa wakhti ka dib markii aan rabay in aan mar kale u isticmaalo, sababtoo ah lama kaydin ama wax kale, u maleynayo inay badbaadi karaan sida sheyga, laga yaabee inaanan wax wanaagsan qabin sababtoo ah waxaan helayaa farriimo aanan fahmin.
Sidaa darteed waxaan weydiistaa caawimaad si loo xalliyo dhibaatadan, fadlan.